Ọ bụrụ na ị onye nwere Android ekwentị na ederede a otutu, ihe Android SMS njikwa bụ mkpa maka gị. Ọ na-abịa kemfe na-esonụ atọ ọnọdụ:
* Ị nwere ụfọdụ dị mkpa ozi na ị ga-mmadụ na mberede ihichapụ ma ọ bụ hapụ ha, otú ị chọrọ ndabere SMS na kọmputa maka ọdịnihu ndia.
* Ị chọrọ idepụta ozi site na iji keyboard na-ezite ha si gị PC ka otu ma ọ bụ multiple kọntaktị.
* Ozi na igbe mbata gị amalite zaa, ị ga-achọ ka ihichapụ ozi ngwa ngwa na conveniently.
N'agbanyeghị ọnọdụ ọ bụla i nwere ike na, ihe kasị mkpa ị na-eche banyere ga-ihe ụdị SMS manịja Android bụ nri maka gị. Ebe a, m na-aga na-egosi gị egwu software na ngwa jikwaa SMS na a-akpali nnọọ mmasị na-adaba adaba ụzọ.
Part 1. Best 3 Software ka ị na-Jikwaa Android SMS on PC effortlessly Part 2. Top 7 SMS Manager ngwa ọdịnala n'ihi Android
Part 1. Best 3 Software ka ị na-Jikwaa Android SMS on PC effortlessly
One-ahịa Android SMS njikwa ka ị na-azọpụta, na-eziga, ihichapụ ma na-ele SMS - dị nnọọ ka a ikuku.
Send SMS ozi kpọmkwem site na kọmputa na-otu ma ọ bụ karịa enyi.
Mbupụ niile ma ọ bụ họrọ SMS eri na kọmputa na-echekwa dị ka TXT / XML faịlụ.
Dị SMS na XML faịlụ na ị exported na MobileGo maka iweghachi.
Họrọ nke ọ bụla SMS anụnụ na ele zuru ezu ozi conveniently.
Wepụ aka ekwentị oku na zipu ozi dị ka a zara mgbe ị na-arụsi ọrụ ike.
Ekekọrịta ọkacha mmasị gị ngwa ọdịnala na ndị enyi gị, ezinụlọ site na SMS.
Hichapụ multiple achọghị SMS na eri na oge onwe elu na Igbe mbata.
Arụ ọrụ nke ọma na Samsung, LG, Google, HTC, Sony, Motorola, Huawei, wdg
Cheta na: The Mac version adịghị ka ị wepụ aka oku ekwentị.
Mma 1. Send na-aza SMS site na kọmputa Kpọmkwem
Kwa ngwa ngwa pịnye na izipu ozi na obere ákwà ngebichi nke Android ekwentị? Ị na-adịghị na ya. Wondershare MobileGo for Android Ike gị kpọmkwem izipu ozi site na kọmputa conveniently. Ọzọkwa, na ya, ị na-adịghị pịnye na zipu otu ozi ka ọtụtụ ndị enyi. Kama nke ahụ, na i nwere ike ederede niile nke enyi gị na otu ibe nke ozi. Wezụga ya, ọ ọbụna-enyere gị aka wepụ aka a ekwentị oku, na zipu ozi dị ka a zaghachi. Nke a na-eme ka ọ nnọọ adaba n'ihi gị mgbe ị na-na na-arụsi ọrụ ike iji zaa a oku ekwentị.
Na-ekpe sidebar nke isi window, pịa SMS. Pịa New. A dialog-abịa si. Pịa cross icon iji họrọ mmadụ na ị chọrọ ka izipu ozi gaa. Mgbe ahụ, pịa OK. Pịnye ozi wee pịa Send.
Njirimara 2. Save Android SMS Ozi na kọmputa
Chọrọ ndabere mkpa SMS ozi bụrụ na ị nwere ike ihichapụ ha accidently? Ọ bụ mfe aka ya. -Aga n'aka ekpe sidebar na pịa SM S. Họrọ SMS eri na ị chọrọ ndabere. Pịa Import / Export> Export niile SMS na kọmputa ma ọ bụ Export họrọ SMS na kọmputa. Na mmapụta kọmputa faịlụ nchọgharị window, pịa Save dị ka ụdị. Na ndọpụta ndepụta, họrọ a ụdị - XML faịlụ ma ọ bụ TXT faịlụ. Mgbe ahụ, pịa Save ịzọpụta SMS si gam akporo ekwentị na kọmputa.
Otu ụbọchị, mgbe ị kwụsịrị na SMS ma ọ bụ mgbe ị na-a ọhụrụ Android ekwentị, ị nwere ike mbubata XML faịlụ Ị na-azọpụta na MobileGo. Pịa Import / Export> Bubata SMS site na kọmputa. Ịnyagharịa na nchekwa na kọmputa ebe XML faịlụ a zoputara. Mgbe ahụ, pịa Open mbubata ya.
Njirimara 3. Hichapụ Multiple SMS si akporo ekwentị
Gị SMS Igbe mbata jupụtara, na ị na-apụghị inweta SMS ọ bụla ọzọ? Ọ bụ oge ka ​​ihichapụ achọghị SMS ozi na SMS eri. Site na ịpị SMS, unu na-abanye SMS management window.
Hichapụ iberibe ozi na a eri: Ele iberibe nke ozi ma na hichapụ gị achọghị n'anya.
Hichapụ Android SMS eri: Tinye akà rà eri ị na-achọghị na-ọ bụla ọzọ. Mgbe ahụ, pịa Hichapụ. Na mmapụta dialog, pịa Ee.
Na-ekiri ndị Video banyere nke a Android SMS Manager
Mobogenie bụ ihe ọzọ na desktọọpụ Android SMS njikwa software. Ọ na-enye gị ike mbubata na mbupụ Android ozi / si a CSV faịlụ, hichapụ ozi nke ị na-achọghị na-ọ bụla ogologo. Wezụga ya, ọ na-ahapụ gị kpọmkwem pịnye ozi na izipu ozi site na PC na ndị ọzọ. Lee mma, nri? Otú ọ dị, e nwere na ka ụfọdụ flaws. Ya interface bụghị mma n'anya ma ọ bụ dị mfe. Mgbe ụfọdụ, ndị ozi na CSV format ada na-dị.
Mụta ihe banyere Mobogenie >>
Tụnyere abụọ SMS manịja Android n'elu, Moborobo nwere mma mma. Nke ahụ bụ, o nwere wuru na-unread na draft ma ọ bụ nchekwa ịzọpụta SMS ị na-agụ ma ọ bụ zipu. E wezụga na, MoboRobo nwekwara-enyere gị aka nyefee SMS na site na Android ekwentị, na-eziga ma zaghachi SMS site na kọmputa, nakwa dị ka hichapụ gị achọghị SMS eri.
Mụta ihe banyere MoboRobo >>
Part 2. Top 7 SMS Manager ngwa ọdịnala n'ihi Android
SMS ndabere + 4.5 / 5 Free
Go SMS Pro 4.4 / 5 Ugwo
SMS Manager + ndabere 3.9 / 5 Free
Dị ka chomp SMS, Textra SMS na-ahapụ gị ederede na a mara mma ma na-eji ire ụtọ ụzọ. Ọ nwere 800+ emojis, animated gifs, animated emojis nakwa dị ka ọchịchịrị mode themes. Na ya, ị nwere ike izipu ma zaghachi akụkụ, ọbụna otu akụkụ ngwa ngwa. Wezụga ya, ọ enye gị ohere iji hazie ọ bụla kọntaktị, dị ka signatures, nnyefe akụkọ, afụ na agba, ụda, vaibret nakawa etu esi, Ịma Ọkwa na ndị ọzọ.
Download Textra SMS si Google Play Store >>
2. SMS ndabere +
Dị ka aha ya na-atụ aro, SMS, ndabere + na tumadi-eji na-enyere gị aka ndabere SMS, MMS na-akpọ ndekọ Google akaụntụ. Dị nnọọ enweta a na ngwa na gị Android ekwentị na banye na gị Google akaụntụ. Na ihuenyo, na-agụ Atụmatụ na ihuenyo iji hazie iwu na ị chọrọ, dị ka ihe na-ndabere (SMS, MMS, oku na ndekọ), Mak SMS dị ka Gụọ, okuku njehie akuko, na ndị ọzọ. Mgbe ahụ, mgbata ndabere nkwado ndabere na mpaghara SMS ma ọ bụ mgbata Weghachi iji weghachi SMS azụ gị Android ekwentị.
Download SMS ndabere + si Google Play Store >>
Go SMS Pro bụ ihe dị egwu SMS Manager maka Android ngwa. Ọ na e dere n'elu 200 mara mma gburugburu na karịa 800 emoticons, ka ị ederede na a mma na-atọ ụtọ ọnọdụ. Ọ na-enyere gị aka ederede SMS na MMS for free, ma zaghachi ngwa ngwa. Na pro version, i nwere ihe salient atụmatụ, ị pụrụ ịnụ ụtọ elu igbe nkeonwe maka ogbugbu Kpọghe, n'ọnụ ụzọ zoro ezo ma na ngosi uru, echebe ndị nkwado ozi na ndị nwere na-akparaghị ókè ohere iji chekwaa gị SMS.
Download Go SMS Pro si Google Play Store >>
Handcent bụ a na-ewu ewu Android ozi ngwa na-eme ka Izi ozi yi. Ọ nwere ike na-mmekọrịta profaịlụ foto site Facebook maka kọntaktị, ka ogologo dị ka aha egwuregwu, setịpụrụ pụrụ iche akwụkwọ, ịke, eziga ntọala maka onye pụrụ iche maka gị. Wezụga ya, ọ na-enye gị na nza nke gburugburu na mbara igwe, nke na-eme Izi ozi yi. Ke adianade do, ọ na-ahapụ gị ndabere gị ozi ederede na MMS na ntọala ka ígwé ojii na weghachite mgbe e mesịrị. Ma akwado ozi ka ígwé ojii bụghị free, ị ga-akwụ maka ya. Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ ozi nke ị chọrọ ịnọgide na nzuzo, i nwere ike iji nzuzo ya igbe zoo ha.
Download Handcent SMS si Google Play Store >>
chomp SMS arụ ọrụ zuru okè na-ahapụ gị hazie ihe niile. Ọ nwere ihe karịrị 800 emojis, ọtụtụ gburugburu, font ụdị, font nha, ndabere akwụkwọ ahụ aja, Ikanam ngosi agba, ụdaolu, vaibret nakawa etu esi, font ụdị, mee ka gị na ederede na; na yi. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere ike igbachi onwe ozi na-mma si snoops, ngwa ngwa zaghachi a ozi mgbe ekwentị gị akpọchiri ihuenyo.
Download chomp SMS si Google Play Store >>
SMS Manager bụ a free Android SMS njikwa ngwa. Ọ na-enyere aka nkwado ndabere na mpaghara weghachite ozi ederede mfe, iyo ozi ederede site na nọmba ekwentị, Igbe mbata na kọntaktị, na-akpali ozi ederede site na ndabara Android Igbe mbata ya Igbe mbata. E wezụga, ị na-adịghị ka nchegbu banyere ozi ederede snoops, dị ka ọ nwere ike zoo na ozi ederede enweghị ihe ọ bụla Chọpụta. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ disables SMS ngosi, nke onwe gị si na-jijiji. Otú ọ dị, ọ bụ na-emegide Android 4.4 ma ọ bụ karịa.
Download SMS Manager si Google Play Store >>
7. SMS Manager + ndabere
Nke a na obere SMS njikwa + ndabere ngwa na-enye gị a mara mma ụzọ dị mfe iji nweta gị SMS Igbe mbata. Site na iji ya, na ị na ike mfe ndabere nile SMS na XML faịlụ, ma weghachi si XML faịlụ. Mgbe ị na-eche na SMS amalite zaa na igbe, ị nwere ike ihichapụ na-achọghị ka ndị onwe elu ohere. Otú ọ dị, ọ bụ n'ezie a dị mfe ngwa ka ị nwere mfe ohere SMS Igbe mbata. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị ọzọ, ị ga mma anya n'ihi na ihe ọzọ.
Download SMS Manager + ndabere si Google Play Store >>
Olee otú ndabere Android SMS
Ndabere Android Ndi ana-akpo Mfe
Ndabere Android App na App Data
Import Ndi ana-akpo ka akporo ekwentị Mfe
Nyefee na Ndi ana-akpo ka a New akporo ekwentị
Copy faịlụ site iPhone ka Android
Best 5 Samsung Kies Alternatives
Otú nyefee data si Acer ngwaọrụ ndị ọzọ Android ngwaọrụ?
> Resource> Android> Top 10 Android SMS Managers N'ihi Ị